Paris oo diyaarineysa qorshe ciyaartooy isdhaafsi ah si ay u hesho Coutninho, laacibkee u diyaarisay?
Wednesday, December 19th, 2018 - 06:03:28
Tuesday February 27, 2018 - 09:00:53 in Wararka by Hussein Hadafow
Kooxda Paris Saint German ayaa dooneeyso inay Kooxda Barcelona u soo bandhigtaa heshiish kala wareegis Kylian Mbappe iyo Coutinho si ay u farxad galisaa Neymar Jr oo ka tirsan Kooxda PSG sida laga soo xiganaayo El Pais.
Paris ayaa dooneeyso inay xiddiga reer France ku heshaa waxoogaa lacag ah iyo Phillipe Coutinho oo Barcelona ku soo biiray dhawaantaan.
Neymar ayaa la soo sheegayaa inuu dareemaayo farxad la’aan taas oo loo sababeeynaayo inuu ka ag ciyaaro Mbappe oo uu u arko inuu yahay xiddig tartan uu kala dhaxeeyo kaas oo uu u arko inuu yahay qof toos kula xifaaltami karo Ballon D’or, isla markaasna ah laacib u dhashay dalkaas Faransiiska isla markaasna jooga dalkiisa asigoo maanka ku haayo in majaladda bixisaa abaalmarintaas ay tahay Faransiiska mid laga leeyahay.
Mbappe ayaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan si rasmi ah uga mid noqon doono PSG ayadoo Kooxda caasimadda ay si rasmi ah u bixin doonto €180 milyan oo euro oo Monaco la siin doono.
PSG ayaa xalka kaliyah ee ah inay ceshtaan Neymar u aragto in Mbappe la siiyaa Barca si ay u helaan saaxiibka qaaliga ah ee Neymar Coutinho kaas oo dhawaan lacago qaali ah kaga tahay Kooxda Liverpool. Barcelona ayaana u aragta in Mbappe uu yahay dooq cajiib ah hadii PSG ah diyaar u tahay in kala badal toos ah arrinka laga dhigaa.